Antanifotsy : Roa lahy mpangalatra moto voasambotra – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2014 → février → 28 → Antanifotsy : Roa lahy mpangalatra moto voasambotra
Antanifotsy : Roa lahy mpangalatra moto voasambotra
Redaction Midi Madagasikara 28 février 2014 Ambohimandroso, Antanifotsy, moto, police
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny “Commissariat de Police” Antanifotsy ny roa lahy mpangalatra moto sy ny lehilahy iray mpividy ny moto halatra. Ny alarobia 26 febroary 2014 teo izy ireo no voasambotra, ka ilay lehilahy mpividy halatra teo Ilempona ary tany Ambohimandroso kosa ireo mpangalatra.
Very teny Alarobia Amboniloha Antananarivo ny moto iray. Nametraka fitoriana ny tompony ka nampiarahany tamin’izany ny sarin’ilay moto sy ny marika famantarana azy. Nametrahany ny dikan’ny taratasy fitoriany sy ny sarin’ilay moto ny biraon’ny mpitandro filaminana tamin’ny toerana samihafa, ka isan’izany ny “Commissariat de Police” Antanifotsy. Ny alarobia 26 febroary 2014 dia nisy lehilahy antsoina hoe Ruffin nitondra moto mitovy amin’ny hita amin’ilay sary avy any Ambohitompoina nandalo teo an-tampon-tanànan’Antanifotsy ka voasambotry ny polisy teo Ilempona.
Rehefa natao ny fanadihadiana ity lehilahy ity dia nanambara izy fa olona roa lahy antsoina hoe Mamy sy Xavier, avy any Ambohimandroso, no nahazoany ny moto, izay natakalo moto iray Kawazaki. Natao ny vela-pandrika ka voasambotra tany Ambohimandroso izy roa lahy. Nilaza izy ireo fa novidiany teny Ambalavao Isotry ny moto. Tsy nisy ny taratasy fifampivarotana satria rehefa avy nandeha nanao fanandramana ilay Moto ry zareo dia tsy hitany teo intsony ilay mpivarotra.
Araka ny fantatra anefa dia efa mpanao ity halatra moto ity izy roa lahy ireto.